Korinto tamin'ny Andro Taloha - Wikipedia
Korinto tamin'ny Andro Taloha
I Korinto dia tanan-dehibe sady fanjakana tao amin'ny andilan-tanin'i Korinto, andilan-tany mampitohy an'i Peloponeso (grika: Πελοπόννησος / Pelopónnēsos) amin'ny tapan'i Grisia eny amin'ny kontinenta, eo anelanelan'ny Atenay (grika: Ἀθῆναι / Athễnai) sy i Sparta (grika: Σπάρτη / Spártê). Atao hoe Κόρινθος / Kórinthos izy amin'ny teny grika. Ny tananan'i Korinto amin'izao andro izao dia hita eo amin'ny 5 km avaratra-atsinanan'ireo sisam-paharavana tranany. Hatramin'ny 1896 no mankaty dia nisy fikarohana arkeolojika nataon'ny American School of Classical Studies at Athens izay nahitana ny ampahany lehibe tamin'ilay tanàna tranainy, sy fisavana vao tsy ela akory nataon'ny Ministera grika momba ny kolontsaina izay nahitana zava-baovao araka arkleolojia tao amin'ilay tanàna.
Sisam-paharavàn'ny tempolin'i Apolo tao aminin'i Korinto
I Korinto dia iray amin'ireo tanan-dehibe vitsy tany amin'ny Andro Taloha izay tsy nanao politikam-panjakazakana (imperialisma). Ny nataony dia ny ny hampanan-karena azy tamin'ny alalan'ny raharaham-barotra sady niaro ny fahafahana tamin'ny fikendren'ny tanàna grika maro fahizay hanitatra ny fanjakazakany. Nanohitra ny zavatra tian'ny Makedoniana sy Akeana ary Romana hatao aminy koa io tanàna io.
Taorian'ny nadravan'ny Repoblika romana azy tamin'ny tana 146 taor. J.K. dia nitsangna indray i Korinto tamin'ny andron'ny Empira romana sady nandroso noho ny fanjanahan-tany sy ny Pax romana (Fandriapahalemana romana) talohan'ny tsy hahitana azy intsony tamin'ny fiafaran'ny tapany farany amin'ny Andro Taloha. I Korinto tamin'ny Andro Taloha dia isan'ireo tanàna lehibe indrindra sady nanana ny naha izy azy tany Grisia, ka nahitana mponina miisa 90 000 tany ho any tamin'ny taona 400 tal. J.K.
Tamin'ny taona 44 tal. J.K., ny Romana dia nanorina tanàna vaovao teo amin'ny nisy ny tanana taloha sady nanao an'izany tanàna izany ho renivohitry ny faritanin'i Grisia nandritra ireo taompolo manaraka.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Korinto_tamin%27ny_Andro_Taloha&oldid=975318"
Dernière modification le 6 Oktobra 2019, à 04:04
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2019 amin'ny 04:04 ity pejy ity.